Landscape Lighting | Fanasan-drindrina amin'ny rindrina LED. Jiro jiro LED | xLedLight.com
Jiro LED anaty trano
Jiro jiro LED
Jiro milina CNC
LED Wall Washer Jiro Jiro jiro LED
LongNor Optoelectronics Co., Ltd. no mitarika Jiro, LED Wall Washer, Mpanamboatra sy mpamatsy tarika azo alefa azo ovaina natsangana tamin'ny taona 2008 miaraka amina mpiasa maherin'ny 200 izay any Shenzhen China. Ny vokatray dia ampiasaina indrindra fanamafisana ny fiangonana, jiro casino, jiro fandravahana hotely, jiro fonenana, jiro ara-barotra ary jiro indostrialy. Nanomboka nanamboatra LED neon flex ny orinasanay, LED strip Lights, LED linear malefaka amin'ny fivoarana voalohany mandritra ny 2008-2011. OEM sy ODM tolotra omena. miaraka amin'ny ekipa R&D matanjaka sy matihanina amin'ny traikefa an-taonany momba ny haitao sy ny vokatra LED, izay afaka miantoka ny kalitao tsara indrindra sy ny androm-piainany lava. Manome famolavolana ny jiro koa izahay. Our Jiro LED loharano, Jiro LED anaty trano, Jiro LED Pool, Zavamaniry palmie, Strip LED malefaka, Jiro milina CNC miaraka amin'ny CE, RoHS, FCC, TUV, SAA, ISO9001 nohamarinina.
Mianara bebe kokoa>
Jiro ambony hazo palmie
Ny jiro 48W Palm Tree Up dia mety amin'ny trano, trano fandraisam-bahiny, klioban'ny firenena, toeram-pivarotana, zaridaina ary saika ny fanaovana jiro rehetra amin'ny hazo rofia. Azo ampiasaina ho toy ny hazo rofia manazava, na hazavana na izy roa miaraka. Jiro miendrika peratra hanazava ny hazo palma amin'ny alina, hazavao ny tontolonao! Miaraka amin'ny haben'ny savaivony sy watts avy amin'ny 12W-72W Palm Tree Up Lights Ny singa rehetra dia aliminioma ary tsy hanosihosy hamela ilay hazo tsy misy ratra IP65 tsy tantera-drano, fitaratra antonony AC100-250V na AC / DC 24V CREE 3030 LED ao anaty fotsy mafana, natiora fotsy, mangatsiaka Fotsy, mena, maintso, manga, mavo, volamena, miova RGB, DMX512 8, 15, 30,60 zana-kazavana misy
Jiro ringan'ny hazo palmie
Jiro miendrika peratra handrehitra ny hazo palmie amin'ny alina, ny Palm Tree Ring Jiro dia mety amin'ny trano, trano fandraisam-bahiny, klioban'ny firenena, toeram-pandraharahana, zaridaina ary saika ny fampiharana jiro hazo palmie rehetra. Azo ampiasaina ho toy ny hazo palmie hazavana, hazavana midina na roa miaraka amin'ny haben'ny savaivony sy watts avy amin'ny 12W-72W Ny singa rehetra dia alimo ary tsy harafesina mamela ny hazo tsy voadona IP65 tantera-drano, fitaratra antonony AC100-250V na AC / DC 24V CREE 3030 LED fotsy mafana, fotsy voajanahary, fotsy mangatsiaka, mena, maintso, manga, mavo, volamena, miova RGB, DMX512 8, 15, 30,60 zoro zana-kazo misy
Peratra fanaovan-jiro amin'ny hazo palmie
Jiro miendrika peratra handrehitra ny hazo palmie amin'ny alina, peratra jiro amin'ny hazo palmie dia mety amin'ny trano, hotely, klioban'ny firenena, toeram-pandraharahana, zaridaina ary saika ny fampiharana jiro hazo rofia rehetra. Azo ampiasaina ho toy ny hazo palmie hazavana, hazavana midina na izy roa miaraka amin'ny haben'ny savaivony sy watts 12W-72W. 65V na AC / DC 100V CREE 250 LED ao anaty fotsy mafana, natiora fotsy, fotsy mangatsiaka, mena, maintso, manga, mavo, volamena, fanovana RGB, DMX24 3030, 512, 8 zoro hazavam-bary misy
Garden Spike Light, raha ny hazavana eny an-kianja no hoso-doko miaraka amin'ny hazavana, dia Jiro spike zaridaina no borosy. Ny jiro mitsipitsipika spike dia ampiasaina hanasongadinana ny jiro ivelany - mba hiantsoana ny saina ho amin'ny endrika maritrano na fizahantany manokana. Tsy toy ny jiro jiro manazava manerana ny faritra midadasika, ny jiro manana hazavana tery kokoa ka afaka mifantoka zavatra iray isaky ny mandeha.
Fiakarana an-tanety, jiro LED anaty tany sy jiro LED jiro any Shina, fanamboarana jiro LED eny ivelany, fanasan-drindrina LED, fanilo jiro loharano
Andiany AR Jiro anaty tany
Fahazavana AR Series sy AR COB Series, AR dia azo fidina isaky ny 8 degre ka hatramin'ny 120 degre. Fa ny AR COB amin'ny haavo 120 degre miorina sy zoro sakany. Ampiasaina amin'ny toerana misy azy io.
Jiro LED ao anaty tarika AE Series
Jiro LED anaty tany sy tontolon'ny jiro LED any Shina, fananganana jiro LED eny ivelany, fanasana rindrina LED, jiro LED loharano
Fampitana hazavana LED an-tanety AD Series
Jiro LED hazavana sy tontolon'ny jiro LED any Shina, fananganana jiro LED eny ivelany, fanasana rindrina LED, jiro LED loharano
Ny LED Wall Washers WW15 Series dia andian-dahatsoratra mpanasa rindrina vita amin'ny rindrina manaraka injeniera miaraka amin'ny fampitomboana ny fahombiazany, ny fahombiazany, ny hazavana ary ny safidy fanaraha-maso bebe kokoa. Ny andiana WW15 dia mety amin'ny fampiharana fanasana rindrina ivelany ary azo fehezina tsy miankina amin'ny DMX tsy misy mpanara-maso ny loko tsotra sy ny fiovan'ny loko. Ny fifehezana DMX dia tsy voatery hatao amin'ny alàlan'ny fandaharan-jiro mandroso kokoa sy loko manokana. Ny fiasa dia miasa amin'ny rindrambaiko DC24V, 120V na 277V AC.
Wall Washer LED WW10 Series no andiany manaraka an'ny mpanasa rindrina vita amin'ny rindrina miaraka amin'ny fampitomboana ny fahombiazana, ny fahombiazany, ny hazavana ary ny safidy fanaraha-maso bebe kokoa. Ny andiana WW10 dia mety amin'ny fampiharana fanasana rindrina ivelany ary azo fehezina tsy miankina amin'ny DMX tsy misy mpanara-maso ny loko tsotra sy ny fiovan'ny loko. Ny fifehezana DMX dia tsy voatery hatao amin'ny alàlan'ny fandaharan-jiro mandroso kokoa sy loko manokana. Ny fiasa dia miasa amin'ny rindrambaiko DC24V, 120V na 277V AC.
Wall Washer Jiro WW8 Series
Ny WW8 Series no andiany manaraka an'ny mpanasa lamba amin'ny rindrina vita amin'ny injeniera miaraka amin'ny fampitomboana ny fahombiazany, ny fahombiazany, ny hazavana ary ny safidy fanaraha-maso bebe kokoa. Ny andiana WW8 dia mety amin'ny fampiharana fanasana rindrina ivelany ary azo fehezina tsy miankina amin'ny DMX tsy misy mpanara-maso ny loko tsotra sy ny fiovan'ny loko. Ny fifehezana DMX dia tsy voatery hatao amin'ny alàlan'ny fandaharan-jiro mandroso kokoa sy loko manokana. Ny fiasa dia miasa amin'ny rindrambaiko DC24V, 120V na 277V AC.
Ny WW7 no andiany manaraka an'ny andiana mpanasa rindrina vita amin'ny injeniera miaraka amin'ny fampitomboana ny fahombiazany, ny fahombiazany, ny hazavana ary ny safidy fanaraha-maso bebe kokoa. Ny andiana WW7 dia mety amin'ny fampiharana fanasana rindrina ivelany ary azo fehezina tsy miankina amin'ny DMX tsy misy mpanara-maso ny loko tsotra sy ny fiovan'ny loko. Ny fifehezana DMX dia tsy voatery hatao amin'ny alàlan'ny fandaharan-jiro mandroso kokoa sy loko manokana. Ny fiasa dia miasa amin'ny rindrambaiko DC24V, 120V na 277V AC.
Jiro pisinina sy jiro LED jiro lomano any Shina, fanamboarana Spotlight LED ivelany, LED Wall Washer, Jiro LED loharano, Ity entana ity amin'ny vidiny mirary amin'ny fifaninanana 6W, 9W, 12W, 15W, 18W ary 24W.
Jiro anaty rano
Jiro anaty rano sy jiro LED jiro ao Shina, mpanamboatra Spotlight LED ivelany, mpanasa lamba LED, jiro milomano
Jiro jiro par56 LED
Manana karazana jiro pisin-jiro Par3 LED 56 miaraka amin'ny fitaovana samihafa izahay. Mety ho fanaraha-maso lavitra amin'ny loko nofinofy RGB na avelao hiova loko ho azy izy io. Fiainana lava be misy fiantohana 3 taona
Jiro jiro LED andiany iray
Ny jiro Pool Pool dia fantatry ny fahombiazany, loko maro karazana no azo averina nefa tsy mila mampiasa sivana fanampiny. Ny jiro Pool Pool dia mateza tokoa ary ny isan'ny fotoana namonoana azy ireo, hetsika matetika matetika amin'ny jiro amin'ny rano, dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany mahasoa. Afaka mahatratra loko misy ny fangaro mifangaro DMX512 izahay.
LED Bar malefaka DRL malefaka
LED Flexible DRL Light Bar Misy patanty. Karazan-bibilava matavy izy io, Osram 5050 LED ao anatiny. afaka miondrika amin'ny tadiavinao izy. Famolavolana endrika tsy manam-paharoa, ny endriny dia entanin'ny "bibilava mahavoky" fametahana Bendable, manangana loharano maivana misy herinaratra LED hazavana, ny lampshade dia mitondra solomaso condenser ho an'ny famoahana hazavana mahery, famolavolana tokana, azo atondrika 360 degre ho an'ny fametrahana amin'ny lalana samy hafa; Ny elanelana midadasika kokoa dia mety amin'ny toeran'ny fametrahana fiara sarotra; ny lamosina dia ampiarahina amin'ny adhesive super-sided roa azo apetaka, ary ny faran'ny roa amin'ny vatan'ny jiro dia misy lavaka fanidiana mba hididiana ny visy. Voaisy tombo-kase sy tsy tantera-drano ny vatan'ny jiro. Water67 kilasy IPXNUMX
COB LED Light Bar, Chips amin'ny solaitrabe aluminium, androm-piainana lava be sy fanalefahana hazavana ambany, ny faniloman-tena dia tena mitovy, miaro ny maso ary tsy mahavariana
240V LED Neon Linear - Luminaire LED miovaova ho an'ny jiro ho an'ny jiro arabo eny ivelany miaraka amin'ny hazavana malalaka tsy misy valaka sy teboka malalaka. Ny fanavaozana naterak'ity tsipika jiro 2 azo avela ity dia nanokatra varavarana vaovao amin'ny famolavolana jiro izay tsy azon'ny luminaires rehetra tonga tamin'izany. Ny LED neon linear dia nahazo ny fankatoavana ireo matihanina amin'ny famolavolana jiro sy ny manam-pahaizana manokana momba ny saha - adika matetika, tsy mitovy velively.
110V LED Neon Linear. Nandritra izay taona lasa izay, nanangona fidirana sy hevitra avy amin'ireo mpamorona jiro, arisiva, injeniera izahay. novolavolainay ny tena Loko. Ny tena loko dia luminaire LED amin'ny alàlan'ny teknolojia encapsulation polyurethane vaovao manolotra fiarovana amin'ny fidirana IP67 ampiarahana amin'ny endrika tsara indrindra amin'ny spectrum LED, hisorohana ny fiovan'ny CCT: True Color. Misy amin'ny karazany roa izy io. Ny top View voalohany antsoina hoe Top View dia mandray an-tanana ireo rindranasa voasaron'ilay teo alohany ho an'ny 2D miondrika mifandraika amin'ny endrika mamiratra. Ny variant faharoa dia manitatra ny fetran'ny famolavolana jiro amin'ny alàlan'ny fanomezana tsipika jiro mitovy homogeneous tanteraka izay azo ahodinkodina na hiondrika amin'ny refy 2 (3D) mba hanarahana ireo fiolahana misy amin'ny foto-kevitra maoderina. Samy Top
Jiro miasa amin'ny milina cnc
Ny jiro miasa amin'ny masinina CNC dia miantoka ny fiasan'ny taona maro tsy misy fikojakojana ny vidiny mihena, fanatsarana ny fahitana amin'ny fizahana ny mason'olombelona, ​​ary mitarika fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny famokarana. Ny jiro LED dia manolo mora foana ny fluorescent ho an'ny asa fanatsarana ny tobin'ny asa ary mampihena ny fanoloana, ny fanamboarana ary ny vidin'ny angovo amin'ny ankapobeny. Jiro miasa amin'ny masinina CNC, jiro famokarana jiro indostrialy ary fampiharana fitaovana ho an'ny milina. Izahay dia mitahiry jiro miasa LED milina indostrialy izay mety amin'ny tontolon'ny fivarotana masinina. fantsom-p tubulaire, jiro milanja mavesatra maoderina vita amin'ny adiresy maharitra sy mifanaraka amin'ny tontolo fanasana milina - mahatohitra rano, menaka, coolant ary zavatra simika hafa. Ny fononteny mivezivezy manerantany dia mamela ny fametrahana jiro mora amin'ny toeram-piasan'ny masinina CNC. Raha tsy hitanao ny Jiro Miasa amin'ny Machine CNC izany
Jiro milina roa mifanila amin'ny CNC
Ny jiro milina cnc roa lafiny dia miantoka ny fiasan'ny taona maro tsy misy fikojakojana ny vidiny mihena, fanatsarana ny fahitana amin'ny fizahana ny mason'olombelona, ​​ary mitarika fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny famokarana. Ny jiro LED dia manolo mora foana ny fluorescent ho an'ny asa fanatsarana ny tobin'ny asa ary mampihena ny fanoloana, ny fanamboarana ary ny vidin'ny angovo amin'ny ankapobeny. Jiro milina roa mifanila amin'ny cnc, famokarana jiro indostrialy ary fampiharana fitaovana ho an'ny milina. Izahay dia mitahiry jiro miasa LED milina indostrialy izay mety amin'ny tontolon'ny fivarotana masinina. fantsom-p tubulaire, jiro milanja mavesatra maoderina vita amin'ny adiresy maharitra sy mifanaraka amin'ny tontolo fanasana milina - mahatohitra rano, menaka, coolant ary zavatra simika hafa. Ny fononteny mivezivezy manerantany dia mamela ny fametrahana jiro mora amin'ny toeram-piasan'ny masinina CNC. Raha tsy hitanao ny Miasa amin'ny milina CNC
Jiro miasa amin'ny LED Machine Tube Tube
Tube LED Machine Machine Light dia manome antoka ny fiasan'ny taona maro tsy misy fikojakojana ny vidiny mihena, fanatsarana ny fahitana amin'ny fizahana ny mason'olombelona, ​​ary mitarika ny kalitaon'ny vokatra sy ny famokarana. Ny jiro LED dia manolo mora foana ny fluorescent ho an'ny asa fanatsarana ny tobin'ny asa ary mampihena ny fanoloana, ny fanamboarana ary ny vidin'ny angovo amin'ny ankapobeny. Tube LED CNC Machine Work Light, famokarana jiro indostrialy ary fampiharana fitaovana milina. Izahay dia mitahiry jiro miasa LED milina indostrialy izay mety amin'ny tontolon'ny fivarotana masinina. fantsom-p tubulaire, jiro milanja mavesatra maoderina vita amin'ny adiresy maharitra sy mifanaraka amin'ny tontolo fanasana milina - mahatohitra rano, menaka, coolant ary zavatra simika hafa. Ny fononteny mivezivezy manerantany dia mamela ny fametrahana jiro mora amin'ny toeram-piasan'ny masinina CNC. Raha tsy mahita ny CNC ianao
Jiro LED ho an'ny milina CNC
Jiro LED ho an'ny milina CNC, B0012-22WL44 miaraka amin'ny fanamarinana CE EMC. Ny jiro milina CNC tsy miovaova kokoa, tsy misy flickering, ny jiro LED Machine CNC dia miantoka ny fiasan'ny taona maro tsy misy fikojakojana ny vidiny mihena, fanatsarana ny fahitana ho an'ny fizahana ny mason'olombelona, ​​ary mitarika fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny famokarana. Ny jiro LED dia manolo mora foana ny fluorescent ho an'ny asa fanatsarana ny tobin'ny asa ary mampihena ny fanoloana, ny fanamboarana ary ny vidin'ny angovo amin'ny ankapobeny. Jiro miasa amin'ny masinera LED ho an'ny milina CNC, famokarana jiro indostrialy ary fampiharana fitaovana ho an'ny milina. Izahay dia mitahiry jiro miasa LED milina indostrialy izay mety amin'ny tontolon'ny fivarotana masinina. fantsom-p tubulaire, jiro milanja mavesatra maoderina vita amin'ny adiresy maharitra sy mifanaraka amin'ny tontolo fanasana milina - mahatohitra rano, menaka, coolant ary zavatra simika hafa. Sliding sliding universal
Ny "Fasana" an'ny jiro mandeha ho azy, ny làlana mankamin'ny loharano maivana amin'ny jiro LED
Daty: 09 / 10 / 2021
Taorian'ny Edison, izay nanao ampihimamba ny tsenan'ny renivohitra, dia namoaka jiro lehibe, ny fampiharana ny takamoa dia niditra tamin'ny vanim-potoanan'ny fandrosoana haingana. Araka ny angon-drakitra fikarohana navoakan'i Fouquet sy Pearson, rehefa mi ...
Ny fanazavana amin'ny ho avy dia laser Lighting na OLED Lighting?
Daty: 24 / 08 / 2018
Misy karazany roa amin'izao fotoana izao ny fitaovana fanamafisana matanjaka: LED, OLED. Ny LED ankehitriny dia tena kely loatra (eo amin'ny iray metimetatra kilaometatra) ary tena mamiratra. Niforona momba ny ...
Famoahana ny anaran'ny orinasa
Daty: 04 / 06 / 2018
Ry mpanjifa sarobidy, mpamatsy ary mpiara-miasa aminay; Ny 2 jona 2018 lasa teo dia faly izahay nanambara fa manova ny anaran'ny orinasanay ho: LongNor Optoelectronics Co., voafetra ny ...
Ny làlana mankany amin'ny hoavy maoderina - LED tavoahangy maivana
Daty: 15 / 12 / 2016
Na dia mitombo hatrany aza ny fironan'ny firoboroboana herinaratra, toy izany koa ny fahatsapantsika ny ilàna ny fampitomboana ny fahombiazany. Toerana iray izay tsy vitan'ny fampiroboroboana ara-barotra rehetra ny mampiasa ...
LED Lighting fahalalana
Ny LED Light Emitting (LED) dia solosaina semiconductor izay manova ny herinaratra ho fahazavana. Ny jiro LED dia manodidina ny 1960, fa vao manomboka mipoitra ao amin'ny trano fonenana ...
Jiro amin'ny Hotely
LED Neon Flex ho an'ny kintana dimy Hotel Decorative Lighting
Fivarotana trano fivarotana trano famolavolana
LED Neon Flex ho Bingo Casino
LED Neon Flex ho an'ny Casino bingo ...
Toy ny anay tao amin'ny Facebook
Jereo ny YouTube
Ampio: LiHe Industrial Zone, NanShan, ShenZhen, Shina
Copyright © 2007-2021 LongNor Optoelectronics Co., Ltd. Zo rehetra voatokana